Adobe Photoshop CS2 कसरी नि:शुल्क र कानूनी रूपमा प्राप्त गर्ने
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Nepali Blog > Photoshop CS2 नि: शुल्क
द्वारा Ann Young, Naveen Pokhrel 2022-01-06, Nepali Blog
यदि तपाईलाई थाहा छैन कि कहाँ डाउनलोड गर्ने र कसरी Photoshop CS2 को कानूनी संस्करण नि: शुल्क प्रयोग गर्ने, मेरो लेख धेरै उपयोगी हुनेछ। म Photoshopका धेरै नि:शुल्क विकल्पहरूको बारेमा पनि कुरा गर्नेछु र Ps र सम्बन्धी बारम्बार सोधिने प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछु Adobe Creative Cloud नि: शुल्क परीक्षण।
Photoshop CS2 लाभहरू
तस्विरहरू दृश्य रूपमा खोज्नुहोस्, फाइलनामद्वारा होइन
धुलो, खरोंच, दाग र चाउरी हटाउने
वेब पारदर्शिताले तपाईंलाई पारदर्शितामा रङहरू पुन: म्याप गर्न दिन्छ, पारदर्शिता परिवर्तन गर्दछ
रोलओभर प्यालेट - रोलओभर अवस्था सिर्जना गर्न, हेर्न र समायोजन गर्न
म परीक्षण Photoshop संस्करण कहाँ डाउनलोड गर्न सक्छु?
नि:शुल्क क्रिएटिभ क्लाउड सदस्यताको लागि धन्यवाद, तपाईंले Photoshopको नि:शुल्क संस्करण डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ सबै कार्यक्रमहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ प्रत्येक क्रिएटिभ क्लाउड कार्यक्रमको पूर्ण संस्करण डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
ADOBE CREATIVE CLOUD डाउनलोड गर्नुहोस्
के म नि:शुल्क संस्करणबाट सशुल्क संस्करणमा अपग्रेड गर्न सक्छु?
यदि तपाईंलाई Photoshop डाउनलोड गर्नु अघि आफ्नो बैंकिङ जानकारी प्रविष्ट गर्न भनियो भने, परीक्षण अवधि समाप्त भएपछि नि: शुल्क संस्करण तुरुन्तै सशुल्क संस्करणमा परिणत हुनेछ। साथै, तपाइँ तुरुन्तै आधिकारिक क्रिएटिभ क्लाउड वेबसाइटमा सदस्यता खरिद गर्न सक्नुहुन्छ।
पूर्ण Photoshop CS2 संस्करणको मूल्य कति छ?
Adobe Photoshop CS2 अब विकासकर्ता द्वारा समर्थित छैन। तर तपाईं नवीनतम Photoshop 23.1 संस्करण डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ .99 प्रति महिना। एकचोटि तपाईंले कार्यक्रम खरिद गरेपछि, तपाईं सबै सुविधाहरू प्रयोग गर्न र अद्यावधिकहरू प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
हो, Photoshop CS2 परीक्षण संस्करणले Windows 10* (64-Bit) वा Windows7(64-Bit), साथै macOS 10.15, 10.14 वा OS 10.13 मा समान रूपमा राम्रोसँग काम गर्छ।
Photoshop CS2 पायरेटेड संस्करण
आजकल, नेट "आधिकारिक" Adobe Photoshop CS2 सफ्टवेयर नि: शुल्क डाउनलोड लिङ्कहरूले भरिएको छ। यद्यपि, तपाइँलाई थाहा हुनुपर्छ कि डाउनलोड, स्थापना र पायरेटेड प्रयोग गर्दै म्याकको लागि Photoshop र विन्डोजले तपाइँको कम्प्युटर र तपाइँ व्यक्तिगत रूपमा गम्भीर समस्याहरू ल्याउन सक्छ। यसैले, भरपर्दो र गुणात्मक कार्यप्रवाहको लागि, म तपाईंलाई कार्यक्रमको इजाजतपत्र संस्करण प्रयोग गर्न र आधिकारिक Adobe पृष्ठमा डाउनलोड गर्न सल्लाह दिन्छु।
बगहरूसँग सफ्टवेयर प्राप्त गर्ने सम्भावना
पायरेटेड Adobe Photoshop CS2 नि: शुल्क संग काम गर्दा, तपाईंले निश्चित रूपमा धेरै बगहरू सामना गर्नुहुनेछ। कार्यक्रम क्र्यास हुन सक्छ, सञ्चालन धेरै ढिलो हुनेछ। साथै, ह्याक गरिएको Ps संस्करणको साथ व्यवहार गर्दा, तपाईंले अद्यावधिकहरू प्राप्त गर्नुहुने छैन र अद्यावधिक गर्न सक्षम नभई सधैं एउटै संस्करणमा रहनेछ।
जब तपाइँ फोटोशप CS2 पूर्ण डाउनलोड गर्नुहुन्छ, तपाइँको कम्प्यूटर भाइरस र विभिन्न दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमहरूबाट संक्रमित हुने सम्भावना छ। यी भाइरस र कार्यक्रमहरूले विभिन्न परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ र तिनीहरूलाई छुटकारा पाउन गाह्रो हुनेछ। सफ्टवेयरसँग काम गर्दा समस्याग्रस्त हुनेछ र कम्प्युटर फ्रिज हुन सक्छ। साथै, तपाईंले क्र्याक गरिएको सफ्टवेयर स्थापना गरेपछि वा पाइरेटेड Photoshop installer प्रयोग गरेपछि तपाईंको कम्प्युटरमा प्रवेश गर्न बाध्य भएका भाइरसहरूका साथ महत्त्वपूर्ण फाइलहरूलाई क्षति पुर्‍याउने जोखिममा हुनुहुन्छ।
फोटोशप CS2 डाउनलोड गर्दै टोरेन्टहरू र अन्य शंकास्पद स्रोतहरूबाट मुक्त, तपाईंले प्रतिलिपि अधिकार कानून उल्लङ्घन गर्दै हुनुहुन्छ। नतिजाको रूपमा, तपाईंले मौद्रिक जरिवाना प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईंलाई त्यसको लागि न्यायमा ल्याइनेछ। यसको सट्टा, तपाईंले Photoshop trial संस्करण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, कार्यक्रमका सुविधाहरू परीक्षण गर्नुहोस् र यदि तिनीहरूले तपाईंलाई सन्तुष्ट पार्छन् भने, इजाजतपत्र प्राप्त सफ्टवेयर किन्नुहोस्।
नि: शुल्क Photoshop CS2 वैकल्पिक
केही कारणका लागि, तपाइँ नि: शुल्क Photoshop CS2 प्राप्त गर्न सक्षम नहुन सक्नुहुन्छ। यस अवस्थामा, म तपाईंलाई तल प्रस्तुत विकल्पहरूमा ध्यान दिन सल्लाह दिन्छु।
PAINTNET नि:शुल्क प्रयोग गर्नुहोस्
गहिरो रंग सुधार
आधारभूत डिजिटल रेखाचित्रका लागि धेरै उपकरणहरू
लिनक्स समर्थित छैन
PaintNet डिजिटल रेखाचित्र र एक सभ्य Photoshop मुक्त विकल्प को लागी एक कार्यक्रम हो। यसको मद्दतले, तपाइँ लगभग सबै रेखाचित्र प्रविधिहरू, जस्तै पानी रङ, तेल, एक्रिलिक चित्रकला र अन्य अनुकरण गर्न सक्नुहुन्छ। उत्पादन macOS र Windows प्लेटफर्महरूमा चल्छ र डिजिटल चित्रकला, चित्रण र फोटोग्राफीको क्षेत्रमा काम गर्ने पेशेवर डिजिटल कलाकारहरूको लागि उत्कृष्ट विकल्प हुन सक्छ।
SUMOPAINT नि:शुल्क प्रयोग गर्नुहोस्
आधारभूत तस्विर सम्पादनको लागि उपयुक्त
RAW फाइलहरूसँग काम गर्दछ
सरल इन्टरफेस र उपकरणहरू
केही उपकरणहरूलाई सुधार चाहिन्छ
SumoPaint एक नि: शुल्क Photoshop विकल्प हो जुन मास्टर गर्न गाह्रो छैन। कार्यक्रमले रंग सुधार र आधारभूत तस्विर रिटचिंगका लागि उपकरणहरूको विस्तृत संख्यामा गर्व गर्दछ। SumoPaint Mac को लागि Ps प्रतिस्थापन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
KRITA नि:शुल्क प्रयोग गर्नुहोस्
व्यावसायिक डिजिटल रेखाचित्र उपकरण
खराब रूपमा विकसित चित्र परिष्करण उपकरणहरू
Krita एक खुला स्रोत तस्वीर सम्पादक र एक राम्रो Photoshop CS2 नि: शुल्क प्रतिस्थापन हो, जसलाई प्राय: आधारभूत डिजिटल रेखाचित्र उपकरणहरू चाहिन्छ। फिल्टरहरू, प्रभावहरू, दोषहरू हटाउने, इत्यादि जस्ता मानक सुविधाहरूको साथमा समान उपकरणहरूको विशाल चयनको लागि Krita को प्रशंसा गरिन्छ।
INKSCAPE नि:शुल्क प्रयोग गर्नुहोस्
भेक्टर ग्राफिक्स को लागी महान उपकरण
RAW ढाँचालाई समर्थन गर्दछ
Inkscape एक उत्कृष्ट Photoshop CS2 Mac विकल्प हो, कलात्मक र प्राविधिक चित्रणहरू सिर्जना गर्नको लागि। उपकरणहरूले तपाईंलाई शटहरू पुन: स्पर्श गर्न, लोगो वा ब्यानरहरू सिर्जना गर्न, विभिन्न ब्रशहरू प्रयोग गर्न दिन्छ। कार्यक्रम कुनै पनि भेक्टर ग्राफिक्स कार्यहरू प्रदर्शन गर्नको लागि उपयुक्त छ।
लिनक्स संग उपयुक्त
चित्र परिष्करणका लागि व्यावसायिक उपकरणहरू
GIMP एक पूर्ण-विशेषतायुक्त खुला स्रोत तस्वीर सम्पादक हो। यसमा Photoshopका धेरै विशेषताहरू छन्, जस्तै फोटो रिटचिङका लागि उपकरणहरू, प्रकाश सुधार गर्ने, तहहरूसँग काम गर्ने, मास्कहरू, आदि।
Photoshop CS2 मा तस्विरहरू एक सुविधाजनक तरिकामा सम्पादन गर्न सुरु गर्न, म तल प्रस्तुत गरिएका केही कार्यहरू प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दछु। नतिजाको रूपमा, तपाइँका चित्रहरू थप अद्वितीय र सुन्दर हुनेछन्।
Photoshop CS2 नि: शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस्
Mac/Win/Linux को लागि Photoshop CS2 नि:शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस्
यस कार्यक्रमका सबै अद्वितीय सुविधाहरू अन्वेषण गर्न Photoshop CS2 नि: शुल्क संस्करण स्थापना गर्नुहोस्। तपाइँ तपाइँको आफ्नै रोचक परियोजनाहरू कसरी सिर्जना गर्ने भनेर पनि सिक्नुहुनेछ।